Fahasalamana - Bezzia | Bezzia (Pejy 6)
Ny anjara asan'ny zava-pisotro isotonic
Amin'ity lahatsoratra momba ny fahasalamana androany ity dia milaza aminao ny fiasan'ny zava-pisotro isotonic ho an'ireo atleta ireo sy ny fotoana tokony hitondrantsika azy ireo.
Ady amin'ny dermatitis amin'ny fahazazana ny fanafody voajanahary
Ao amin'ny lahatsoratry ny reny ankehitriny dia miahiahy momba ny fahasalaman'ny zanakay izahay: Miady amin'ny dermatitis amin'ny fahazazana miaraka amin'ny vahaolana voajanahary sy vahaolana.
Angano momba ny sakafo izay tsy tokony hinoantsika
Androany dia mahita angano maro momba ny sakafo izay mampiahiahy amin'ny olana ara-pahasalamana maro isika, na izany aza, tsy maintsy fantatrao hoe iza amin'ireo no marina
Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny asma
Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fahasalamana androany dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny asma: fitsaboana, soritr'aretina ary zava-misy mahaliana momba an'io aretina io.
Voasary vita an-trano hiadiana amin'ny fitohanana
Raha te hiady amin'ny fitohanana ianao, dia aza hadino ireo malama voajanahary izay miasa lafatra. Tsotra, haingana ary matsiro.
Inona ireo zavamaniry azontsika raisina mba handevonan-kanina tsara
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao hoe inona ny zavamaniry azontsika raisina mba handevonan-kanina tsara. Safidio ny iray izay miady indrindra amin'ny olan'ny fandevonan-kanina.
Ny vahaolana tsara indrindra hamaranana ny aretin'andoha
Aza adino ny fanafody tsara indrindra hampitsaharana ny maharary fo. Ho fanampin'izany, azonao atao ny mahalala ny antony sy ny fomba hisorohana an'io fahatsapana io.
Ny fanafody voajanahary sy ny tetika hitsahatra tsy hanaikitra ny hoho
Betsaka ny olon-dehibe mitazona ny mania manaikitra ny hohony, rehefa ela ny ela dia mety hiteraka olana ara-pahasalamana eo am-pelatanany izany, jereo ny fanafody tsara indrindra
Diabetika ve ianao ary bevohoka? Fitandremana tokony horaisinao
Diabetika ve ianao ary bevohoka? Raha manahy anao io dia azonao atao eto ny mamaky ny fitandremana tokony hataon'ny vehivavy manoloana ny toe-javatra misy anao.
Sakafo manimba ny enamel-nifyo amin'ny farany
Zava-dehibe ny fitazonana ny fahasalamana am-bava voakarakara tsara. Ianaro ny sasany amin'ireo sakafo mety hahatonga ny enamel hiova ho mavo.
Fitsaboana voajanahary amin'ny endriny
Manelingelina tokoa ny fomba, na izany aza, raha tsy manana fanafody ao an-trano ianao dia afaka mitsabo azy io voajanahary amin'ireo fanafody voajanahary ireo
Fanatanjahantena hanao fanazaran-tena any ivelany
Amin'ity lahatsoratra fahasalamana androany ity dia mitondra fanatanjahan-tena 4 ho anao izahay hanao fanazaran-tena any ivelany: mihazakazaka, tai chi, mandeha an-tongotra ary bisikileta. Inona ny anao?
Karazana maratra sy ny fomba fanesorana azy ireo
Amin'ity lahatsoratra momba ny fahasalamana androany ity dia milaza aminao izahay hoe inona ny karazana fery misy ary ahoana no ahafahantsika manafoana azy ireo na mampihena ny fahitana azy ireo.
Dibera shea, fananana ary tombontsoa ho an'ny hoditsika
Ny dibera shea dia nanjary malaza ary ankehitriny dia vokatra tena ilaina amin'ny fikolokoloana sy ny fitsaboana ny hoditra, fantaro izay fananany lehibe indrindra
Fomba mora mandoro kaloria 100
Jereo hoe ahoana no ahafahanao mandoro kaloria 100 amin'ny fomba mora sy haingana. Hetsika izay tanterahinay isan'andro, izay hahatsapanao fa salama kokoa.
Hetsika bikiniana eo imasony? Aza atao ireo lesoka ireo amin'ny sakafonao!
Manakaiky ny fahavaratra ary miaraka aminy, ny fandidiana bikini. Lazainay aminao ny angano diso izay misy momba ny sakafo hahatratrarana endrika tena izy.
Sakafo mampihena ny filana zava-mamy
Etsy ambany no hahalalanao ny lakileny hialana amin'ny filan'ny sakafo mamy, santionan'ny sakafo misy fananana tsara manome hery anao
Sakafo fotsy manimba fahasalamana
Amin'ny natiora dia mahita sakafo fotsy izay mety hanimba ny fahasalamantsika isika, fantaro hoe inona izany
Ahoana ny fomba hitsaboana tsara ny mony
Amin'ity lahatsoratra momba ny hatsarana-pahasalamana androany ity dia lazainay aminao ny fomba hikarakarana tsara ny mony. Araho ireto torohevitra ireto amin'ny fitsaboana isan'andro.
Raha tsy manana fanamboarana molotra ao an-trano ianao dia mariho ireo fanasitranana ao an-trano ireo
Ny molotra dia ampahany marefo amin'ny vatana, ilaina ny mahafantatra hoe inona ny fanafody ary mahazo fanamboarana molotra namboarina mba ho tonga lafatra foana
Sakafo manampy anao hihazona ny atidohanao ho tanora
Ny fitazonana ny ati-doha amin'ny filaminan'ny asa tsara dia mora kokoa amin'ny fanarahana sakafo tsara. Miresaka momba ny sakafo atolotra indrindra an'izany isika.
Ahoana ny fomba fanesorana ny tavy ao ambanin'am-palongo
Raha te hahafantatra ny fomba fanafoanana ny tavy ao ambanin'ireo armpits misy toro-hevitra tsotra ianao dia aza hadinoina izay entinay anao. Manaova veloma an'ireo tahony fitiavana pesky ireo!
Antony mahatonga anao mitombo lanja ary tsy misy ifandraisany amin'izay nohaninao
Ny lanja mavesatra dia tsy vokatry ny sakafo ratsy na fahazaran-dratsy tsy mahasalama. Azo atao koa ny mahazo lanja noho ireo antony efatra ireo.
Sakafo sakafo hariva azonao atao raha tsy manenina ianao
Aza adino ity safidy sakafo hariva ity izay azonao atao nefa tsy manenina. Mandehana mitady lovia mahasalama indrindra.
Kolokoloy ny fahasalamanao ara-tsaina amin'ny fanarahana ireto torohevitra tsotra ireto
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny fomba hikolokoloana ny fahasalamana ara-tsaina amin'ny fanarahana ireto torohevitra tsotra ireto. Hilamina sy ho tony ianao.
Torolàlana fohy hianarana misaintsaina
Amin'ity lahatsoratra anio momba ny fahasalamana ity dia manome anao torolàlana fohy hianaranao misaintsaina, na ireo dingana, na ireo toro-hevitra amin'ny ankapobeny.
Ny tombony lehibe azo avy amin'ny borosy maina ho an'ny hoditra
Fantatrao ve ilay antsoina hoe borosy maina?. Androany dia hitantsika ny tsirairay amin'ireo tombontsoa lehibe avel'ity fanao tsotra ity amintsika.
Fomba ahazoana mihinana salama ny ankizy
Indraindray dia tsy mora ny mampiditra ankizy hatramin'ny fahazazany ny maha-zava-dehibe ny fihinanana sakafo mahasalama. Manome anao ny lakilen'ny fanatanterahana izany izahay.
Misy fahasamihafana ve eo amin'ny migraine sy migraine?
Amin'ity lahatsoratra anio ity dia manafaka anao amin'ny fisalasalanao ianao raha misy ny tsy fitovizan'ny migraine sy ny migraine, ankoatry ny filazanao aminao ireo soritr'aretina ireo.
Hatsarao ny fanatontosanao voajanahary amin'ny Vanir Go!
Raha te hanatsara ny fahasalamanao sy ny fahombiazanao ianao, na ny vatana na ny saina, tsy misy toa an'i Vanir Go. Vokatra revolisionera ary mahasalama. Jereo
Milalaova fanatanjahan-tena, nefa amin'ny fahiratan-tsaina
Manome torohevitra vitsivitsy anao izahay anio, indrindra ho an'ireo vao manomboka amin'ny fanatanjahan-tena sy fiainana ara-pahasalamana: manaova fanatanjahan-tena, saingy amin'ny fahiratan-tsaina.
Zava-pisotro voajanahary 6 hanamaivanana ny aretin'andoha
Raha te hahalala ny fomba fanamaivanana ny aretin'andoha ianao, dia tsy hadinonao ireo zava-pisotro mahasalama enina azonao atao ao an-trano ireo.
Loza sy vokadratsin'ny fiakaran'ny tosi-dra
Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fahasalamana androany dia mamintina fohifohy ny loza mety hitranga sy ny fijaliana amin'ny fiakaran'ny tosi-dra isika. Karakarao tsara ny tenanao!
Inona ny migraine ary ahoana no fomba hiadiana amin'izany?
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny migraine sy ny fomba hiadiana amin'izany: ny fitsaboana sy ny fitsaboana hafa.
Zava-misy mahafinaritra momba ny sakafo junk
Androany dia atolotray anao ao amin'ny lahatsoratra natokana ho an'ny fahasalamana ny zava-misy mahaliana momba ny sakafo junk. Fantatrao ve ny maro tamin'izy ireo?
Fambara mialoha ny aretin'i Parkinson
Ao amin'ny lahatsoratra natokana ho an'ny fahasalamana androany dia lazainay aminao hoe inona ireo famantarana 10 taloha tamin'ny aretin'i Parkinson. Tsy maintsy omena maro hanahirana
Tombony azo amin'ny fikorontanana 30 minitra isan'andro
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny tombony azo avy amin'ny fikotranana mandritra ny 30 minitra isan'andro. Ny torimaso tsara indrindra dia tsy afaka maharitra ela kokoa noho ny amin'ity indray mitoraka ity.
Tombontsoa ara-pahasalamana ara-tsaina amin'ny fanatanjahan-tena
Androany dia manolotra tombony 10 amin'ny fanatanjahan-tena ho an'ny fahasalamana ara-tsaina isika. Ny fampiharana fanatanjahan-tena adiny iray isan'andro dia tsy mitondra soa afa-tsy amin'ny ho avy.
Fantatrao ve hoe abs hypopressive?
Amin'ity lahatsoratra ity anio momba ny fahasalamana sy ny fahasalamana dia manazava ny momba ny abs hypopressive izahay ary milaza aminao ny fanazaran-tena tokony hatao.
Tombony sy fatiantoka amin'ny fihinanana legioma mangatsiaka
Jereo ny tombony sy ny fatiantoka ny legioma mangatsiaka. Vokatra tena ilaina ao an-dakozianay sy ao anaty lovia mahasalama anay.
Fahazarana mahasalama izay hanampy anao hisoroka aretina toy ny homamiadana
Raha te hampihena ny mety hisian'ny aretina toy ny homamiadana ianao, dia tena zava-dehibe ny fanarahana ireto fahazarana mahasalama manaraka ireto.
Vahaolana hisorohana ny herinaratra ambany
Ny tosidra ambany dia fantatra amin'ny hoe hypension, olana iray izay iharan'ny olona sasany. Fantaro izay soritr'aretina misy azy ireo ary inona ireo fanafody voajanahary azontsika jerena.
Ireo zavamaniry diuretic tsara indrindra, mamarana ny fihazonana ny tsiranoka
Ny fitazonana ny tsiranoka dia olana iaretan'ny olona maro, mahita zavamaniry diuretic maro isika amin'ny natiora izay tonga lafatra hamongorana azy ireo
Teas tsara indrindra hatoriana mandritra ny alina ao anaty indray mipy
Raha mila matory sy miala sasatra ianao dia andramo ireto dite matory ireto. Hevitra voajanahary izay azonao omanina ao anatin'ny minitra vitsy. Jereo izy ireo!
Voaroaka amin'ny asa? Torohevitra hiatrehana ny zava-pisotro ratsy
Raha vao voaroaka tamin'ny asanao ianao ary mahatsapa fa efa an-dàlana izao tontolo izao ... Mialà sasatra! Araho ny torohevitray ary tadiavo ny lafiny tsara!
Ny fihenjanana maharitra dia mifandray amin'ny hatavezina
Raha mahatsapa fihenjanana amin'ny fiainanao ianao na mieritreritra fa mijaly amin'izany matetika dia tokony ho fantatrao fa misy ifandraisany amin'ny olana ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana izany.
Ny fanafody an-trano tsara indrindra hiadiana amin'ny hemôrôida
Aza adino ny fitsaboana any an-trano tsara indrindra ho an'ny hemoroida. Ny fivontosana sy ny fanaintainana dia hanao veloma anao mandrakizay misaotra azy ireo.
Fomba fanamafisana ny lamosina ambany
Amin'ity lahatsoratra momba ny fahasalamana androany ity dia milaza aminao ny fomba hanamafisana ny ambany izahay raha te hisoroka ny fanaintainana amin'ny ho avy toy ny hoe efa mijaly amin'izy ireo isika.
Antony 6 hampidirana voa chia ao anaty sakafonao
Raha miahiahy momba ny voan'ny chia ianao, androany dia mahita antony 6 miompana amin'ny fampidiranao azy ireo amin'ny sakafonao. Ho hitanao ny fiovana!
Ahitra fanafody ho an'ny diabeta
Misy karazana anana efatra amin'ny natiora izay manampy antsika hampihena ny haavon'ny siramamy, hiady amin'ny diabeta amin'ireo zavamaniry ireo
Tiroiditis mitaiza Fantaro ny fambara amin'ny aretin'i Hashimoto
Ny tiroiditis an'i Hashimoto dia aretin-koditra autoimmune izay matetika manomboka tsy misy soritr'aretina mazava. Lazainay anao izy ireo.
Fanafody an-trano 6 ho an'ny tenda
Ho an'ny tenda maharary dia manana fanafody an-trano mahomby be izahay. Aza adino ny momba ny zava-mahadomelina ary andramo ireo hevitra voajanahary ireo.
Fahadisoana mahazatra 8 izay manakana antsika tsy hihena
Raha te hihena ianao dia tsy tokony hanao ireo hadisoana valo hodinihintsika anio ireo. Azo antoka fa mihoatra ny iray no nitranga taminao.
Fanafody an-trano fanamaivanana kohaka
Amin'ity lahatsoratra ity izahay dia mitondra andian-dahatsoratra an-trano hanamaivana kohaka. Tsy misy manasitrana sery, fa azontsika atao ny manamaivana azy amin'ny fomba sasany.
Ianaro ny fomba fanomanana fampidirana dipoavatra ho an'ny fanaintainan'ny vavony
Izahay dia mitsabo zavamaniry fanafody mety tsara hanaovana infusions miaraka aminy hikarakarana ny fahasalamantsika, ny peppermint dia manana fananana lehibe
Zavatra azonao atao hiatrehana ny andronao amin'ny angovo!
Raha iray amin'ireo manomboka ny andro amin'ny angovo kely ianao dia mahaliana anao izay holazainay aminao. Araho ireto torohevitra ireto ary ... mihinana ny andro!
Fetsy 12 hialana amin'ny sigara
Tianay ny firariana taona vaovao ho anao ary hanampy anao amin'ny tetika tsara indrindra hahafahanao manatanteraka ny fanapaha-kevitra hialanao amin'ny sigara. Ity taona ity eny!
Rumatika, ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ity aretina ity
Fantatrao ve ny momba ny rheumatism? Aza manahy fa avelanay eto ianao miaraka amin'ireo teboka manan-danja indrindra. Manomboka amin'ny soritr'aretina ka hatrany amin'ny antony sy fanafody.
Ny psikolojia ampiasain'izy ireo ao amin'ny supermarket hahatonga anao hividy bebe kokoa
Raha te hanandrana hitahiry any amin'ny supermarket amin'ity Krismasy ity ianao dia tadiavo ny teknika ara-psikolojika sasany izay ahafahanao mividy bebe kokoa!
Inona no atao hoe fitsaboana niokleary ary inona no vokany? Jereo bebe kokoa amin'ireto teknika tena ilaina ireto mba hahitana ny homamiadana sy hanaraha-maso ny fitsaboana azy.
Fantaro amin'ny ankapobeny ny atao hoe gliosida
Ny karbohidraty dia misy akora hafa izay mety tsy fantatrao hoe inona, lasa manam-pahaizana momba ny sakafo miaraka amin'ireto angona manaraka ireto
Sakafo hialana amin'ny trombosis na lalan-dra
Mianara hahalala izay sakafo tsara indrindra hikarakara ny vatanao ary hisorohana azy ireo tsy hahazo trombosis na embolism amin'ny ho avy
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fihenjanana ho an'ireo manana fihenan-tsaina
Ny fihenan-tsaina dia ny mifanohitra amin'ny fiakaran'ny tosidrà, izany hoe matetika na saika misy tosi-dra ambany foana, izany dia mety hiteraka tsy fahazoana aina
Voanjo macadamia, tombontsoa ary fananana
Ny voanjo macadamia dia afaka manampy anao hiverina amin'ny tanjaka, hampihena ny kolesterola ratsy ary hampihena ny lanjanao, mety aminao ny fahasalamana
Mihena noho ny voasarimakirana, sakamalao ary chia
Ny iray amin'ireo zava-pisotro lehibe hampihena ny lanjany dia ny fampifangaroana ny voasarimakirana, miaraka amin'ny voamaso sy chia, afangaro azy ireo ary manomboka mahatsikaritra ny tombotsoany.
Masirasiran'ny Brewer amin'ny maraina
Ny masirasiran'ny Brewer dia ahafahanao manomboka ny andro amin'ny fomba hafa, miaraka amin'ny tsy faharerahana sy hery bebe kokoa, sakafo sahaza ho an'ny mpihaino rehetra
Sakafo mety hampihenana ny kibo
Fantaro ary tadidio hoe iza no sakafo tsara indrindra tokony hohaninao mba hahazoana kibo fisaka, sakafo manampy hanaparitaka ny kibonao
Fantaro ny fananan'ny magnesium carbonate, tombony lehibe izay hotateriny rehefa mihinana azy
Ny aretina fanorohana
Azavainay ny tsiambaratelo rehetra momba ny aretina fanorohana: ny fomba fanaparitahana azy, ny soritr'aretina ary ny fitsaboana tsara indrindra manohitra io aretina manelingelina io
Ny mozika hatoriana dia mety indrindra ho an'ireo olona manana olana amin'ny torimaso. Ampidiro ary fantaro izay hira tsara indrindra tokony hatoriana tsara.
Ny tombony 10 amin'ny mozika miala sasatra
Ny mozika miala sasatra dia afaka manampy anao hahatsapa ho tsara. Jereo ny tombony 10 amin'ny mozika miala sasatra ary henoy ny sasany amin'ireo hira atolotra anao
Inona no atao hoe melatonin ary inona no ampiasaina?
Fantatrao ve hoe inona ny melatonin ary inona no ampiasaina azy io? Jereo ny tombony sasany azony ary koa ny vokany. Hahagaga anao izany!
Ny fanorana tsara indrindra sy ny tombotsoany ho an'ny vavony fisaka
Raha te hampideradera kibo fisaka ianao dia tsy maintsy mihinana sakafo kely, manao fanatanjahan-tena ary mazava ho azy, fanorana manokana. Jereo hoe ahoana eto!
Mandeha isan'andro ny filamatra hitandremana ny fahasalamanao
Aza misalasala, izao no fotoana anananao manao fanazaran-tena ary inona no fomba tsara kokoa hanaovana azy amin'ny fomba mahasalama indrindra, mandeha an-tongotra isan'andro
Ahoana ny fomba fanamboarana gilasy an-trano mahasalama sy haingana
Ankafizo ny gilasy homamiadana iray mahasalama sy matsiro. Fomba tonga lafatra hihinanana voankazo nefa tsy asiana kaloria bebe kokoa amin'ny sakafonao. Soraty ireo fomba fahandro ireo!
Ahenao ny valahanao amin'ireto torohevitra manaraka ireto
Mampiseho aminao lakile tsotra vitsivitsy izahay mba tsy hanadino ny tanjonay hahatratrarana andilana kely kokoa hanana olo-malaza tsara ao anatin'ny iray volana
Torohevitra hialana amin'ny fanahiana mandritra ny sakafo
Ny fisakafoanana dia lohahevitra tena sarotra, sarotra ny mahafantatra tanteraka hahazoana ny fahombiazana tsara indrindra avy aminao, ho tratrarinao amin'ireto torohevitra ireto
Raha te ho very kibo kely ianao dia tadiavo ny fanorana mihena. Ho vitanao ny hamoy ny sisa tavela amin'ny fanaovana azy isan'andro.
Inona no hohanina rehefa manana fe-potoana ianao?
Lojika sy ara-dalàna ny miovaova kely ny sakafontsika mandritra ny fadimbolana ary mitranga izany noho ny tsy fifehezana ny hormonina izay iaretantsika mandritra ireo andro ireo.
Antony tokony hihinanana manga
Ny manga dia voankazo izay tokony hohanin'ny tsirairay isan'andro noho ny tombony rehetra entiny amin'ny vatana.
Fantaro ireo karazana voaloboka samihafa
Betsaka ny vinaingitra, na izany aza tsy maintsy ianaranao hoe inona avy ny tsirairay avy ary inona no fampifangaroana tsara indrindra azontsika atao
Toetra mahafinaritra an'ny broccoli
Ity hazo maitso kely ity dia hitondra tombony lehibe ho anao, ny broccoli dia heverina ho sakafo faran'izay lehibe izay tsy tokony hatsahantsika mihinana
Mahaiza mandrisika hanao spaoro!
Efa mba nanontany tena ve ianao hoe maninona ianao no tsy manana io fikirizana io hanohy hilalao fanatanjahantena? Eto izahay no milaza aminao.
Lakile very fatin'ny kibo
Iray amin'ireo sarotra esorina indrindra, ny tavy kibo dia mitondra aretin'andoha marobe, fantaro ny lakileny hanafoanana azy
Rano maintso ho an'ny fihenan-danja
Ny ranom-boankazo maintso dia mety amin'ny fahaverezan'ny lanja, satria mahavoky izy ireo, manome vitamina sy angovo hiasa be ary afaka mampihena ny lanjany tsy misy ezaka
Manana fanaintainana amin'ny hatoka ve ianao? Lazainay aminao ny soritr'aretin'ny fifanolanana amin'ny hatoka ary ny fomba ahafahanao mamaha azy ireo amin'ny fampihetseham-batana azonao atao ao an-trano.
Bulimia sy anorexia dia aretina lehibe roa izay mitondra andian-vokatra isan-karazany ho an'ny olona mijaly amin'izany. Inona no vokany eo aminao?
Umeboshi, ilay plum japoney
Umeboshi, dia karazana apricot Japoney izay manova ny fahasalamantsika, manana fananana sy tombontsoa lehibe izay manampy antsika hahatsapa ho tsara kokoa
Fanafihana tampoka, lazainay aminao ireo soritr'aretina sy fitsaboana manokana izay tsy maintsy raisina raha mijaly amin'ity olana ity ianao.
Sakafo mahafinaritra tokoa, masirasiran'ny mpamaky
Ny masirasiran'i Brewer dia mandray ny lohateny afovoan'ny gastronomikan'ny firenentsika ary tsy kely kokoa izany raha raisintsika ho tombony ireo
Ahoana no hitsaboana decalcification amin'ny nify?
Ny fanimbana ny nify dia misy amin'ny fihenan'ny habetsahan'ny calcium ao anaty zavamananaina. Inona no vahaolana ananan'io olana io?
Fahadisoana ataontsika amin'ny sakafo maraina
Amin'ny fotoana maro dia tsy mahazo ny otrikaina ilaina isika hisakafoanana maraina, dia manao fahadisoana izay tsy maintsy haintsika ny mamantatra
Ireo no sakafo mandevona indrindra
Tokony ho mpiara-miasa amintsika ny sakafo hanatanterahana ny tanjontsika, amin'ity indray mitoraka ity dia miresaka momba ny mahasalama indrindra
Inona no fotoana mety indrindra amin'ny sakafo maraina, atoandro ary sakafo hariva
Tokony hojerentsika hoe oviana no fotoana tsara indrindra hihinanana sakafo lehibe amin'ny andro, hisakafoanana maraina, atoandro ary sakafo hariva amin'ny fotoana mety indrindra
Soa azo avy amin'ny voankazo sy legioma sasany
Ny fihinanana sakafo tsara dia ilaina mba hahatsapana ho tsara na amin'ny ivelany na amin'ny atiny. Matetika ny olona maro no mila ...
Menaka ilaina ao an-dakozia
Mahita menaka marobe isika eny an-tsena, saingy tsy ny rehetra no samy mahasoa ny fahasalamantsika, mianatra misafidy izay tsara indrindra
Ireo karazana ratra
Lazainay aminao ny karazana ratra izay misy sy ny fikarakarana tokony horaisina mba hahasitranany haingana araka izay tratra. Fomba ahoana ny ratra?
Manala ny filan'ny nofo ve ny pilina fanabeazana aizana?
Mihinana pilina fanabeazana aizana ve ianao ary nihena ny fiara fitadiavana firaisana? Fantaro raha misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisanareo ny pilina fanabeazana aizana.
Tongolo manohitra ny fitohanan'ny orona
Esory miaraka amin'ny tongolo ny fitohanan'ny orona. Jereo ny fomba fampiasana tongolo ho fanafody mahomby indrindra an-trano manohitra ny moka.
Sakafo be vy handresena anemia
Manana anemia ve ianao? Sakano ny soritr'aretiny amin'ireto sakafo ireto izay misy fatrana vy betsaka kokoa ary hanatsara ny fahasalamanao.
Aretina masirasira am-bava: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny thrush am-bava dia aretina masirasira amin'ny lela sy ny firakofan'ny vava.
Ny maha-zava-dehibe ny vitamina ho an'ny fahasalamana
Na dia tsy manome azy ireo ny lanjan'izy ireo rehetra aza izy ireo, ny vitamina dia fitambarana tena ilaina izay tsy maintsy lanintsika ho an'ny ...
Dibera legioma, fomba fahandro mahasalama
Ny dibera dia teo foana tao an-dakozianay, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia soloin'ireto mpivaro-kena legioma matsiro sy mahasalama manaraka ireto
Manome tetika anao izahay hahafahanao mahazo kilao fanampiny amin'ny fomba mahasalama. Raha liana te hanana lanja ianao satria manify dia manara-penitra.
Ny sakafo tsy voalanjalanja dia mety hisy fiantraikany amin'ny vatantsika amin'ny fomba samihafa ary miteraka fikorontanana sasany amin'ny fahasalamantsika. Fantatrao ve izay?
Lisitry ny laxatives voajanahary tsara indrindra
Ny sakafo laxative tsara indrindra izay manampy antsika amin'ny fizotran'ny tsinay hananana fahasalamana tsara ary hahafahantsika miala tsy misy fahasarotana
Inona ny abscesses?
Inona ny abscesses? Jereo ny karazana abscesses mahazatra indrindra, ny soritr'aretin'izy ireo, ny fitsaboana azy ireo ary ny fikarakarana azy ireo.
Fakan-kevitra momba ny gynecological
Raha handeha hitsidika ny mpitsabo aretim-behivavy ianao dia izao no sasany amin'ireo consultations lehibe ataon'ny vehivavy amin'ny manam-pahaizana manokana. Manana fisalasalana ve ianao? Midira hamaha azy ireo.
Resipeo 5 hanala ny vatanao amin'ny vatana
Tena ilaina tokoa ny manala ny vatana indraindray, mangataka fialan-tsasatra tsindraindray ny vatana ary miaraka amin'ireto fomba fahandro 5 ireto dia azonao izany
Manimba ve ny sakafo am-bifotsy?
Ny sakafo am-bifotsy no filaharan'ny andro, fototr'izany amin'ny ankamaroan'ny trano sy ny pantry. Hitanay raha ampy tsara izy ireo
Aza asiana kafe!
Betsaka ny olona misotro kafe amin'ny maraina ary manampy siramamy, ronono na tsiro hafa, saingy maro no tsy mahalala fa manimba ny fahasalamany izany.
Squat amin'ny karazany rehetra
Ny fampihetseham-batana dia tokony ho famenon-tsakafo miaraka amin'ny sakafo voalanjalanja sy mahasalama mahatratra endrika mahamenatra, miaraka amin'ny squats hahatratra ny tanjonao
Rahoviana no manahy ny amin'ny fivaviana
Ilaina ny fivaviana amin'ny vatan'ny vehivavy, fa rahoviana ianao no tokony hiasa saina?
Ny OCU dia mamakafaka kosmetika
Araka ny azonao antoka fa efa fantatrao, ny OCU dia ny Fikambanan'ny mpanjifa sy ny mpampiasa izay manome antsika ...
Torohevitra hitsaboana holatra hoho
Ny holatra amin'ny nohomboana dia faharatsiana fahita matetika be lavitra noho izay azonao an-tsaina, ary ny ratsy indrindra ...
Hevi-diso sy fahamarinana momba ny mpandoro tavy
Ny L-carnitine, taurine, choline, inosine, lecithin, pyruvate, glucagon, methionine, nitric oxide, linoleic acid, creatinine, sns, dia vitsivitsy monja amin'ireo ...
Ahoana ny fomba hampidinana ny kibonao amin'ireto fanazaran-tena tsotra ireto
Raha te hahalala ny fomba fampidinana ny kibonao ianao dia ampisehoanay ny fanazaran-tena tsara indrindra hahatratrarana azy. Hevitra hampiharana ao an-trano, aza hadino izany!
Fomba hafa hahazoana tsindrin-tsakafo mahasalama kokoa
Azo hanina mamy sy mahasalama izy io, ianaro izay safidy hafa voajanahary mety indrindra amin'ny resipeo momba ny tsindrin-tsakafo mahazatra
Fehezo amin'ireto infusions manaraka ireto ny fitaintainanao
Ny infusions dia mety hifehezana sy hitondra fahasalamana bebe kokoa, hiady amin'ny adin-tsaina ary ny tebiteby miaraka amin'ireo zavamaniry manaraka
Sakafo izay mampiakatra lanja anao amin'ny alina
Betsaka ny sakafo manimba antsika ary manampy amin'ny fanimbana ny sakafontsika, mitandrina amin'ny sakafo hariva be loatra sy ny fandevonan-kanina tsy mahomby
Sakafo 10 handoroana tavy kibo
Aorian'ny fialantsasatry ny Noely dia miverina amin'ny zava-misy. Ny tena mahasambatra dia tsy nahazo kilo ary ireo izay ...
Fetsy mandeha amin'ny voditongotra
Mianara mitsangantsangana araka ny tokony ho izy miaraka amin'ireo torohevitra sy horonan-tsary valo ireo amin'ny fandehanana amin'ny kiraron'ny vehivavy.
Raha manao fanatanjahan-tena ianao dia hitranga aminao izao manaraka izao
Ny fanatanjahantena dia tsy maintsy ampidirina amin'ny fanaontsika andavanandro, hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny vatantsika izany, ka tokony hialantsika ny hakamoana ankehitriny
Karazan-dronono ronono isan-karazany
Ny fironana ara-tsakafo vaovao dia ny ronono an-javamaniry izay mihamatanjaka noho ny fahasalamany amin'ny vatantsika
Fibroadenomas na kista tratra
Zava-dehibe ny fahalalana hoe inona ny karazana kista tratra azontsika jerena ao amin'ny tratrantsika ary inona no fitsaboana manaraka
Inona no atao hoe diverticulitis ary inona ny antony
Diverticulitis dia aretina mampanaintaina izay, raha tsy voatsabo ara-potoana, dia mety hiteraka komity tena lehibe.
Ny maha-zava-dehibe ny estrogen sy ny progesterone amin'ny fitondrana vohoka
Ny estrogen sy ny progesterone dia mitana andraikitra lehibe mandritra ny dingana maha-bevohoka.
Fanasitranana sy fitsaboana ny Bartholinitis
Mianara mitsabo sy manasitrana bartolinitis ao an-trano, antony sy antony mahatonga ny fihary ao Bartolo
Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny kiraro tsara?
Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny kiraro tsara? Misafidiana tsara mba tsy hijaly ny tongotrao isaky ny mandeha.
Mampihena lanja mandritra ny torimaso, Turboslim Cronoactive
Afaka mihena ve ianao rehefa matory miaraka amin'ny Turboslim Cronoactive? Hitanay ny tsiambaratelo amin'ity famenon-tsakafo ity izay hanampy anao hihena.
Taolan-tehezana tapaka, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny ankamaroan'ny taolan-tehezana tapaka dia manasitrana ao anatin'ny 2 ka hatramin'ny 6 volana, afa-tsy ireo tranga matotra indrindra.
Ny antony sy ny fanafody ao an-trano amin'ny nify mora tohina
Ny fanafody an-trano dia mety indrindra amin'ny fampihenana ny fanaintainana sy ny tsy fahazoana aina ateraky ny nify mora tohina. Aza adino ireo asehonay anao anio!
Sakafo tsara indrindra hampihena ny lanja
Fantaro hoe iza no sakafo tsara indrindra hampihena ny lanja sy hampihena ny lanjanao amin'ny fomba mahasalama, aza atao atahorana ny fahasalamanao
Inona ny aretin'i Addison ary inona ny soritr'aretiny?
Ny aretin'i Addison dia vokatry ny famotehana ny vatan'ny kortinal adrenal tsirairay.
Fitsaboana ny kista tratra
Jereo ny fitsaboana kista tratra sy ny torohevitra tsara indrindra hanamaivanana ny fanaintainana vokatr'ireo vongan-tratra ireo ao amin'ny tratran'ny vehivavy.
Inona ireo kista ao amin'ny tratra?
Voan'ny vombony? Lazainay aminao daholo ny momba ny kista ao amin'ny tratra mba hahafahanao mandinika raha manana ianao ary mankanesa any amin'ny dokoteranao mba hialana amin'ny homamiadan'ny nono.
Miaina fofonaina madio foana
Ny fofona ratsy dia aretina iray izay mety hisy fiatraikany amin'ny olona maro, ny fanarenana izany dia tena ilaina mba hananana fiainana ara-dalàna
Ahoana no hiadiana amin'ny fery mangatsiaka?
Inona ny herpes labial? Lazainay aminao ny antony hisehoan'ny fery mangatsiaka, ny soritr'aretin'ity aretina ity ary ny tetika hanasitranana azy amin'ny fotoana fohy indrindra.
Tombony azo avy amin'ny ronono almond
Aza adino ny antsipiriany ary jereo ireo tombontsoa lehibe entin'ny ronono amandy amin'ny vatanao sy ny fahasalamanao ary tokony hararaotinao faran'izay haingana.
Amin'ny fararano dia mikarakara ny fahasalamanao ny ampongabendanitra
Ny hatsaran-tarehy voankazo fararano dia ny ampongabendanitra, aza hadino izany. Mianara sy mandray soa amin'ny zavatra rehetra mety ho vitany ho anao sy ny fahasalamanao
Ny antony mahazatra ny fanaintainan'ny fivaviana
Mahatsapa fanaintainana amin'ny fivaviana ve ianao ary tsy fantatrao izay mety ho vokatr'izany? Androany aho hiresaka momba ny antony mahazatra sasany.
Pole Dance, nahoana no mampihatra azy?
Iray volana sy tapany lasa izay, tamin'ny andro toy ny androany, nisy namana iray nandresy lahatra ahy hanao zavatra iray izay ...
Torohevitra 2 hanarenana anao amin'ny fiankinan-doha
Fantatrao ve hoe inona ny fiankinan-doha? Olona miankina amin'ny kaody ve ianao? Aza manahy fa afaka manova ny fiainanao ireo toro-hevitra roa ireo.
Mitsambikina tady mety very lanja
Azo antoka fa hadinonao, fa ny mitsambikina tady no filaharan'ny andro, manomàna tady ary mitsambikina hanala ireo kilao fanampiny ireo
Sakafo mba ho tsara tarehy kokoa isan'andro
Sakafo mba ho tsara tarehy kokoa isan'andro: lisitry ny sakafo 10 mitontaly izay tokony ampidinao amin'ny menio sakafo, izao!
Ny vokatry ny Lexatin amin'ny alikaola
Lexatin dia iray amin'ireo fanafody voatendry indrindra ary an'ny vondrona mpampitony antsoina hoe benzodiazepines
Dipteria: areti-mifindra, soritr'aretina ary fisorohana
Ny diphtheria dia aretina lehibe ateraky ny bakteria ary matetika dia misy fiantraikany amin'ny tenda sy ny fonon'ny moka ao amin'ny oron'ny zaza.
Izay voankazo manana collagen be indrindra
Raha te-hampideradera ny hoditohitanao sy ny fahatanoranao ianao dia aza hadinoina ireto voankazo manaraka ireto izay manana collagen tsara be ho an'ny hoditrao.
Sakafo mananasy handotoana ny vatana
Sakafo tsotra iray vita amin'ny mananasy hanampiana ny vatantsika hanadio tena sy hanala ny poizina be loatra
Fanampiana voalohany ho an'ny epileptika
Ny areti-mandringana dia ny aretina mitaiza amin'ny ati-doha ateraky ny olona maherin'ny 60 tapitrisa manerantany.
Inona ny aretin'ny neuronan'ny motera ary inona ny soritr'aretiny?
Aretin'ny neurônônôma fantatra amin'ny anarana hoe amyotrophic lateral sclerosis
Alopecia Areata: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny aropecia areata dia toe-javatra iray izay mitarika ho amin'ny fihenan'ny volo ary izany dia ateraky ny fametahana boribory izay mety hitarika amin'ny loha manontolo.
Mumps na Parotitis
Ny mumps na parotitis dia miparitaka amin'ny alàlan'ny viriosy antsoina hoe Paramyxoviridae ary nandritra ny taona 60 io aretina io dia niantraika tamin'ny ankizy sy ny tanora
Ny crème Nutracort dia crème tsara hanamaivanana ny tongotra reraka, ny fivontosana, ny hoditra mangidihidy, ny dermatitis atopika, ny ézema, ny psoriasis ary ny ...
Fanaintainana iraisana mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fanaintainana iraisana mandritra ny fitondrana vohoka dia iray amin'ireo toe-javatra izay matetika mitranga matetika
Rano sira Fantatrao ve ny tombotsoany?
Fitsaboana voajanahary miorina amin'ny rano misy sira. Ny tombo-tsoa rehetra ateraky ny rano misy sira amin'ny vatanao: manasa vava, fadio ny dandruff, hydration tsara kokoa, ...
Azonao ampitaina ahy ve ny sira? Eny, fa iza amin'ny rehetra?
Firy ny karazana sira fantatrao ary iza no tena mahasoa ny vatanao fa tsy mitovy daholo ary tsy mitovy fitondran-tena
Allergie amin'ny hoditra
Ny fihenan'ny alika amin'ny hoditra na ny fihenan'ny alika izay mitranga ao amin'ny vatanao dia samy hafa be
Inona ny fahasalaman'ny asa ary inona no ilana azy?
Ny fahasalamana amin'ny asa dia fivondronan'ny paikady mikendry ny fiadanam-batana, ara-tsaina ary ara-tsosialy ny olona amin'ny tontolon'ny asany.
Kapohio ny onja hafanana
Mitandrema tsara amin'ny onjan'ny hafanana mamely ny saikinosy manontolo, mialà amin'ny hafanana ary mianara miatrika onja hafanana
Pancreatitis, vokatry ny kolesterola avo
Ny pancreatitis dia fivontosana ao amin'ny sarakaty, ny fihary ao akaikin'ny aty sy ny vavony izay manampy handevona sy handraoka sakafo.
Sakafo aphrodisiac amin'ny fahavaratra
Ianaro sy fantaro hoe inona ireo sakafo aphrodisiac ary araraoty ny singa ao aminy handany fitiavana amin'ny vadinao mandritra ny alina
Tombony azo avy amin'ny tongolo gasy mainty
Manolotra an'ity sakafo kely sy mahaliana ity izahay, ny tongolo lay mainty izay mitety izao tontolo izao izay manomboka amin'ny faritra atsinanana indrindra amin'ny planeta
Miadia amin'ny adin-tsaina sy ny havizanana amin'ireo sakafo ireo
Miadia amin'ny adin-tsaina isan'andro miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka avelanay anao ireto. Mora sy tsotra ny mihatsara amin'ny tenanao
Mampihena lanja amin'ny fihinanana paoma isan'andro
Mahalafo ary mampihena lanja tsy misy olana amin'ny fihinanana paoma isan'andro, ho hitanao fa misaotra anao ny vatanao, hahatsapa ho salama kokoa sy hanana tanjaka bebe kokoa ianao
Karazana homamiadana mahazatra indrindra
Ny homamiadana dia aretina mampatahotra tokoa, fa raha ny tena izy dia misy fanasitranana io, ny tantaran'ireo olona niady tamin'io aretina io ary nandresy tamin'ny ady dia matetika kokoa.
Tandremo ny masonao amin'ity fahavaratra ity
Manomboka ny andro tsara ka mila mijery tsara ny fikarakaran'ny masonao ianao, dia mety hisy vokany eo amin'ny taratra ultraviolet
Ny antony matetika matetika hitsidihana ny mpitsabo nify
Ny antony matetika matetika hanatonana ny mpitsabo nify dia vokatry ny fanovana sasany izay miseho amin'ny sosona ivelany na enamel amin'ny satroboninahitry ny nify, ny satro-boninahitra dia ny ampahany amin'ilay nify hita eo am-bava
Ny nify sy ny asany
Ny nify dia ny taolana tafiditra ao anaty valanoranon'olombelona sy ny hazondamositra avo kokoa, misy karazany maro ny nify ary ireo taolana ireo dia misy ampahany hita maso ao am-bava antsoina hoe satro-boninahitra
Miteraha ny volonao alohan'ny fahavaratra
Alohan'ny fahavaratra dia amboary ny volonao amin'izay dia vonona amin'ny volana mafana indrindra rehetra amin'ny taona izy, mba tsy hampijanona ny sira, ny ranomasina, ny chlore na ny dobo filomanosana
Fitsaboana voajanahary hiadiana amin'ny conjunctivitis
Ny Conjunctivitis dia mety hiseho tsy misy antony ary hijanona miaraka aminao mandritra ny fotoana fohy, ianaro ny fomba hisorohana ny fisehoany ary inona no fitsaboana voajanahary tsara indrindra
Zavatra 5 mety hiteraka havizanana sy havizanana be
Ny aretina lehibe, indrindra ireo izay miteraka fanaintainana, dia mety hahatonga antsika ho reraka, na izany aza misy fepetra maro hafa izay tsy dia lehibe loatra ka mety hahatonga antsika hahatsiaro ho reraka.
Miaina miaraka amin'ny psoriasis
Ny psoriasis dia aretina iharan'ny 2% mahery amin'ny mponina. Izy io dia fanovana ny hoditra izay miteraka fihenan-koditra sy fanovana amin'ny hoditra
Fantaro raha manana faharanitan-tsaina ianao
Ny fananana faharanitan-tsaina mivoatra dia hitondra toetra tsara lehibe amin'ny fomba fisainanao sy ny fivoaranao eo amin'izao tontolo izao, tadiavo raha toa izany ianao
Inona no antony mahatonga ny teboka fotsy amin'ny mpianatra
Betsaka ny antony samihafa mahatonga ny teboka fotsy amin'ny mpianatra; raha ny marina raha ny kornea izay mazàna miloko
Mamaha ny fisalasalana momba ny lantom-pifandraisana izahay
Ny lantom-pifandraisana dia manamora ny fiainana ny olona maro, fa alohan'ny hidiranao amin'ny tontolon'ny lantom-pifandraisana dia tsy maintsy fantatrao izay ilaina amin'ny fampiasana azy ireo
Mety ho antony mahatonga ny fanaintainan'ny kibo tampoka tampoka
Ny fanaintainan'ny kibo mafy dia mety hiteraka ahiahy bebe kokoa raha oharina amin'ny fanaintainan'ny vavony izay matetika vetivety ary tsy dia matotra.
Mifehy sy mampihena ny kolesterola avo
Ahenao ny kolesterola avo amin'ny fomba fiaina tsara, ovao ny sakafonao ary ampiasao ny vatanao handroahana azy
Mahatonga anao matavy ve ny jam rehefa hoy izy ireo?
Mahatonga anao matavy ve ny jam rehefa hoy izy ireo? Tsy marina izany! Eto izahay dia milaza aminao ny soa azo avy amin'ny fahasalamana.
Ny antony sy ny antony mampidi-doza amin'ny cellulite
Cellulite dia toe-javatra iray izay misy akony amin'ny ankapobeny amin'ny tampon-koditra, na izany aza dia mahazatra ihany koa ny miantraika amin'ny vatan'ny hoditra.
Fambara sy fitsaboana amin'ny septum mivadika
Tokony holazaina fa ny ankamaroan'ny olona dia tsy manana septum orona mifanaraka tanteraka, noho izany dia miresaka toe-javatra mahazatra isika.
Tono tongotra sy glute ao an-trano miaraka amin'ireo fanazaran-tena ireo
Ataovy ireto fanazaran-tena manaraka ireto mba hahitanao endrika tsara ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, ny fitenenana sy ny tongony ao an-trano
Inona no maha-bevohoka ny molar ary inona ny soritr'aretiny
Ny fitondrana vohoka molara dia fahasarotana tsy fahita firy izay mitranga rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny fizotran'ny zezika ary vokatr'izany dia tsy mivoatra tsara ny placenta na ny foetus
Fampiasana cocacola hafa
Fampiasana Coke izay mety tsy fantatrao, mianatra avy amin'ireto tetika ireto hanatanterahana izany amin'ny fotoana hafa ividiananao Coke
Inona ny fibroids ary inona ny soritr'aretin'izy ireo
Fibroids dia fitomboana tsy ara-dalàna izay mipoitra ao amin'ny tranonjaza vehivavy ary indraindray dia lehibe ka miteraka fanaintainana mafy amin'ny kibo miaraka amin'ny vanim-potoana mavesatra.
Fitsipika fototra amin'ny fitazonana ny fahasalamana nify tsara
Ilaina ny fahasalaman'ny nify mba hanana andro tsara isan'andro. Tsy voamariky ny vava mandra-pahatongantsika tsy mahazo aina dia tsy maintsy mitazona fahasalamana am-bava tsara isika
Malahelo sy mandoa, inona no mahasamihafa azy?
Voalohany indrindra, zava-dehibe ny hanazavana fa ny fisaleboleboana sy ny fandoavana tsy aretina, fa kosa dia soritr'aretina miseho amin'ny toe-javatra maro samihafa.
Ny tsy fitoviana eo amin'ny tsy fahazakana sakafo sy ny allergy
Jereo hoe inona ny maha samy hafa ny hoe misy allergy sy ny tsy fahazakana sakafo
Sakafo izay tsy tokony hohaninao
Betsaka ny sakafo tsy mahazo aina amintsika, ireo izay manimba ny vatantsika ary rehefa mandeha ny fotoana dia mahatonga antsika ho ratsy toetra, mianatra manalavitra azy ireo
Ampidinina miaraka amin'ny masomboly chia
Ny masomboly Chia dia sakafo lehibe nipoitra indray, ianaro ny momba azy rehetra ary ampio amin'ny sakafonao isan'andro
Sakafo fanoherana homamiadana
Fantaro hoe iza no sakafo anticancer tsara indrindra mety ho hitanao eny an-tsena, ampio ny vatanao ho salama lava kokoa
Jereo eto raha manana allergy sakafo ianao
Fantaro ireo soritr'aretina isan-karazany sy karazan'aretina maha-mahazaka aretina izay azontsika iaretana. Tena ilaina ny mahafantatra ny fihinanana sakafo sasany
Fa maninona ianao no mahatsapa ho ratsy rehefa manomboka misakafo?
Nanomboka ny sakafo tamin'ny volana Janoary ve ianao ary mahatsiaro ho reraky ny toe-tsaina ratsy kokoa? Ny zava-drehetra dia misy fanazavana, aza hadino ny antsipiriany.
Mampihena lanja amin'ny oatmeal sy rano oatmeal
Oatmeal dia sakafo tsara raisina isan'andro, manomàna rano oatmeal isa-maraina ary ho hitanao fa salama kokoa ianao ary mihamihena ny lanjanao
Misotroa rano mafana miaraka amin'ny voasarimakirana isa-maraina dia ho hitanao ny mahasamihafa azy
Ampahafantaro isan'andro isan'andro ny vera misy rano mafana miaraka amin'ny voasarimakirana isa-maraina hahasoavana ireo fananana lehibe ao aminy, dia ho hitanao ny mahasamihafa azy
Famantarana ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza
Ny soritr'aretin'ny homamiadan'ny vozon-tranonjaza dia tsy soritr'aretina foana, ary amin'ny tranga sasany dia tsy miseho ny soritr'aretina mandra-pahatongan'ny dingana efa mandroso tokoa ny aretina.
Carrera de San Silvestre dia manomboka ny taona amin'ny tongotra ankavanana
Ny hazakazaka malaza indrindra amin'ny taona dia eto, ny San Silvestre satria isan-taona dia handray ny araben'i Espana. Ianaro izay ilaina amin'ny fampandehanana azy
Fistula Sacrococcygeal: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny fistula sacroxygeal, antsoina koa hoe sinus pilonidal izay midika hoe "Akany volo" amin'ny teny latinina, dia momba ny fahitana volo ao anaty loiona.
Loza ateraky ny fitsaboana tena mandritra ny fitondrana vohoka
Ny fitsaboana samirery amin'ny fitondrana vohoka dia mety hisy fiantraikany amin'ny fivoaran'ny taova sasany amin'ny zaza toy ny taovam-pananahana
Soa azo avy amin'ny voaloboka, aza adino ity alina taloha ity
Tahaka ny isaky ny isaky ny taona vaovao dia ento miaraka amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao ireo voaloboka tsara vintana 12, fa fantaro amin'ity taona ity ny tombony azo sy ny anton'io fomban-drazana io
Inona ny fihintsanan'ny tongotra ary inona no fitsaboana azy
Ny filatsahan'ny tongotra dia ny tsy fahaizana mampiakatra ny alohan'ny tongony ka mahatonga ny rantsan-tongotra hitsoaka amin'ny tany rehefa mandeha.
Fambara sy fahasarotana amin'ny fitohanana
Ny fitohanana dia toe-javatra mitranga rehefa mihetsika tsimoramora ao anaty tsinay ny fivalanana.
Fisaintsainana… Mbola tsy nanandrana azy io ve ianao?
Ny fianarana misaintsaina dia lasa lamaody isan'andro. Manohana teknika misaintsaina ny siansa, ary nanomboka ...
Inona no atao hoe anemia sela?
Ny tsy fahampian'ny sela marary dia ny aretin'ny sela fijaliana; aretina lehibe io izay mamokatra sela mena mena miovaova ny vatana
Inona avy ireo otrikaretina urinary
Ny otrikaretina urinary dia vokatry ny bakteria, virus, na holatra ary mety hitranga na aiza na aiza ao amin'ilay lalan-dra.
Lakile tsy hanan-tavy amin'ity krismasy ity
Ho avy ny krismasy ary matahotra ny ho matavy daholo isika, miaraka amin'ireto toro-hevitra ireto dia afaka mankafy ny fialantsasatra ianao nefa tsy manapaka ny tenanao ary mahazo aina tsara amin'ny endrikao.
Fitsaboana cystitis na aretina urinary voajanahary
Fitsaboana cystitis voajanahary. Tsy ho olana intsony ny mahazo aretina urinary. Fantaro ny fanafody voajanahary tsara indrindra hisorohana sy hanasitranana azy
Makà sary tsara amin'ny Electro Fitness
Fantaro ny fomba fiofanana vaovao. Electro Fitness tonga any amin'ny gym. Fomba vaovao hahatakarana ny fanatanjahantena ao anatin'ny 20 minitra fotsiny.
Arovy foana ny kolesterola avo
Ny kolesterola dia singa matavy izay hita ao amin'ny vatantsika, tsy maintsy mifehy ny haavony isika mba ho salama
Araho ny sakafo alika hanadio ny vatanao
Ny lamaody alkaly dia nanjary lamaody nandritra ny volana maromaro, ity sakafo ity dia manampy anao hifehezana ny pH amin'ny vatana, mametra ny asidra ary manampy ho salama kokoa
Inona ny tsindrona kortisone?
Cortisone dia karazana steroid iray novokarin'ny vatana voajanahary, indrindra ny fihary adrenal, rehefa tojo toe-javatra mampiady saina.
Inona no mahatonga ny Cirrhosis amin'ny aty
Ny antony mahazatra indrindra amin'ny cirrhosis amin'ny aty dia ny hépatite C, ny atiny matavy, ary ny fisotroana alikaola, na izany aza, ny zavatra manimba ny aty dia mety hitarika an'io aretina io amin'ny farany.
Ny maha-zava-dehibe ny torimaso tsara
Tokony hiala sasatra sy hatory tsara isika mba hananantsika angovo sy fahasalamana tsara ao amin'ny vatantsika. Amin'ireto torohevitra ireto dia azonao atao ny mampifanaraka fitsaharana tsara.
Mahalalà ny sakafo arakaraky ny vondron-dranao
Ianaro ny sakafon'ny dokotera D'Alamo araka ny vondrona misy anao ary ampio ny vatanao hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny fihinanana ireo sakafo sahaza anao indrindra
Zavakanto: soritr'aretina sy fitsaboana
Ny gallstones dia mety miforona rehefa misy kolesterola be loatra ny bile, na izany aza tsy mbola mazava tsara ny antony.
Ataovy lavo daholo ny tananao
Ny tan dia sarotra azo, noho izany, avelanay anao ireto fikafika ireto haharitra mandritra ny volana fararano
Kombo ny hozatra: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny hozatry ny hozatra amin'ny ankapobeny dia mitranga amin'ny hozatry ny tongotra, indrindra ireo izay hita ao anaty zanak'omby.
Fantaro ny fotokevitra momba ny Ebola
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia niresaka momba ny valanaretina Ebola vaovao ny tsirairay, fantaro izay rehetra ilainao ho mailo sy hahafantatra ny fomba hamantarana an'ity aretina lehibe ity
Ny marenina: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Ny fihenan'ny ampahany na ny totalin'ny fihainoana dia antsoina hoe marenina; toe-javatra iray izay mety hianjadian'ny haavon'ny fahasalaman'ny sofina manomboka amin'ny antonony ka hatramin'ny fahaverezan'ny fihainoana
Inona no mahatonga ny paranoia ary inona ny soritr'aretiny
Ny Paranoia dia faritana ho toy ny toetry ny fahasalaman'ny saina izay fantatra amin'ny hoe fikorontanana mahatsiravina, izay miseho maharitra amin'ny fiheverana tafahoatra,
Karakarao amin'ny sunscreen tsara ny hoditrao
Ny masoandro dia tsy maintsy mpiara-miasa aminao amin'ity fahavaratra ity mba hitazomana ny hoditra ho salama sy tsy hisy ketrona. Ankafizo ny masoandro amin'ny antonony
Mampihena lanja amin'ny fanaovana CrossFit
Mitovy amin'ny TRX ihany, Crossfit dia tonga nijanona ary nanjary iray amin'ireo teknika be mpampiasa hampihena ny lanjany amin'ny fiofanana.
Fanabeazana aizana vaovao ho an'ny vehivavy
Ity dia fomba fanabeazana aizana vaovao ho an'ny vehivavy izay manolo ny safidy fantatra rehetra ary vetivety dia teny an-tsena
TRX: fiofanana fampiatoana
Ianaro ny momba ny TRX, ny fomba fanatanjahan-tena vaovao izay miteraka fahatsapana. Aza miandry ary araraoty izay rehetra azonao atolotra anao
Allergie amin'ny masoandro
Ianaro izay atao hoe allergy amin'ny masoandro ary miadia amin'ireo vay sy pentina manelingelina azy mba ho tsara amin'ity fahavaratra ity.
Fitsaboana varises ary asehoy ny tongony amin'ity fahavaratra ity
Amin'ity fahavaratra ity dia mampiseho tongony tsy misy be pitsiny izy ary mankafy ny torapasika, fandroana ary mandeha an-tongotra lavitra eny amoron-dranomasina. Fitsaboana ireo lalan-drà varika ireo fanafody voajanahary ireo
Araraoty ny ranomasina amin'ny fialan-tsasatrao
Na eo aza ny fisian'ny ranomasina amin'ny fiainantsika dia tsy fantatsika ny tombony rehetra entiny aminay, ka manasa anao hahalala azy ireo
Momba ny collagen rehetra
Ny collagen dia ao anatin'ny vatantsika, tsy voamariky izy io fa io no mpiara-miombon'antoka tsara indrindra ananantsika mba ho tsara ny hodintsika sy ny taolana ary ny ligamentantsika
Ny antony sy ny tetika amin'ny maso mena
Na dia hafahafa aza ny fahitana azy, matetika dia tsy voamariky ny maso, na inona na inona loko ananany, tsy maintsy mikarakara azy ireo isika ary miaraka amin'ireto torohevitra ireto dia ho azonao izany.
Momba ny fery mangatsiaka
Fantatra ny fery mangatsiaka, izay aretina manelingelina izay misy fiantraikany amin'ny faritry ny vava. Miaraka amin'ireo fanafody voajanahary ireo ianao dia hiatrika ilay asa hiadiana aminy
Ny fiantraikan'ny alikaola amin'ny fahasalaman'ny nify
Miaraka amin'ny olana ara-batana maromaro mifandraika amin'ny fanjifana azy, ny alikaola koa dia mety hisy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny nifin'ny olona.
Aza adino ny momba ny cellulite amin'ireto fampiharana tsotra ireto
Amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena antonony, farafahakeliny intelo isan-kerinandro, dia hampihena ny cellulite ianao ary hanana hoditra milamina sy malefaka kokoa.
Mitady sakafo hariva maivana? #Cenothins
Andro vitsy alohan'ny hahatongavan'ny fahavaratra, azonao antoka fa ho feno ianao amin'ny fandidiana # bikini, toy izao ...
Esory miaraka aminao ny milomano ireo kilao fanampiny ireo
Efa misy fofona toy ny fahavaratra, maka ny fanazaran-tena ary miditra tanteraka amin'ny pisinina mba hamoizanao ireo kilao fanampiny ireo ary ho tsara tarehy amin'ity fahavaratra ity, mandehana milomano
Torohevitra sy tetika hiadiana amin'ny allergy amin'ny lohataona
Ny allergy amin'ny lohataona dia misy fiantraikany amin'ny olona maro ary miaina miaraka aminy isan-taona izy ireo. Ianaro andian-tetika maromaro hanalana soritr'aretina voajanahary
Fanazaran-tena ilaina amin'ny fandidiana bikini
Eto ny toetr'andro tsara ary tsy maintsy manao fanatanjahan-tena isika mba hahatanteraka ny fampandehanana ny bikini mampatahotra, amin'ity taona ity dia tsy hanohitra ireo fanazaran-tena tsotra ireo ianao
Mbola tsy mahalala azy ireo ve? Makà malama maitso ary manatsara ny fahasalamanao
Ny voasarimakirana maintso dia horohoro malaza feno vitamina sy otrikaina izay mitazona anao milahatra ary mameno anao tontolo andro
Ampidirina amina trano maro tsikelikely ny tsipelina ary tsy kely kokoa, ity sakafo kely ity dia mamindra ny voamadinika, varimbazaha malaza indrindra.
Mananasy: ny mpiara-dia aminao tsara indrindra hampihena ny lanja
Tsy maintsy mitazona ny tarehintsika isika. Amin'ny fampidirana mananasy ny sakafontsika dia hisoroka ny fihazonana tsiranoka ary handray soa avy amin'ireo otrikaina ao aminy isika
Ny fandotoana, manimba kokoa noho ny fiheverantsika ny fahasalamantsika
Misy fiatraikany mivantana amin'ny fahasalamantsika ny fandotoana any amin'ny tanàna, ny aretina lehibe dia misy ifandraisany amin'ny taha ambony amin'ny fandotoana
Hepatite B: antony, soritr'aretina ary fitsaboana
Hepatitis B dia aretin'aty atin'ny fianankaviana Hepadnaviridae (viriosy ADN hepatotropika)
Fetsy tsara indrindra hampisehoana ny fitombenanao
Mba hampisehoana ny vatanao amin'ity fahavaratra ity dia mamela anao andiam-pitaka maromaro izahay izay tsy tokony tsy jerenao ity andiam-panatanjahan-tena ity handefasana ny fitombenanao
Quinoa: ny sakaizin'andriamanitra
Nanjary nalaza i Quinoa ary tsy latsa-danja noho izany, ity sakafo kely ity dia manana fananana lehibe ao anatiny izay mahasoa ireo izay mandray azy
Resin-tory taorian'ny traikefa nahatsiravina
Raha sendra traikefa mampivadi-po isika, dia mijanona ao anaty vodilanitra tsy ahafahantsika mivoaka ny eritreritsika. Ahoana no ahafahantsika mahazo torimaso indray?
Mamitaka mba tsy hanaikitra ny hoho intsony
Raha manana fahazaran-dratsy manaikitra ny hoho ianao dia fantaro ny tetika tsara indrindra hialana amin'izany. Hanampy anao hitombo ny hoho ianao ary hahazo tanana tsara tarehy
Ny herpes genital dia aretina azo avy amin'ny firaisana izay miparitaka amin'ny alàlan'ny fifandraisana akaiky mandritra ny firaisana ara-nofo.
Ny Almond dia tsy tokony hanjavona amin'ny sakafontsika
Ny Almond dia mandray ny maha-zava-dehibe ary jerentsika lalina ny toetrany sy ny tombontsoany amin'ny fahasalamantsika. Manakana ny aretina marobe izany.
Krema sy makiazy ho an'ny hoditra misy olana amin'ny mony
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehontsika ohatra ny menaka sy makiazy ho an'ny hoditra misy olana amin'ny mony. Makiazy sy menaka fanamavoana azo tsaboina. Tandremo tsara!
Ny hirsutism dia aretina miteraka fitomboan'ny volo amin'ny vehivavy amin'ny toerana mahazatra ny lehilahy toy ny tarehy, tratra ary ny lamosina
Ny fanasitranana tongolo lay Tibetana taloha
Izahay dia mizara ny fanasitranana tongolo lay Tibetana taloha, fanomanana miorina amin'ny tongolo lay sy alikaola izay manadio sy manala ny vatantsika amin'ny fomba tsotra sy mahomby.
Manomboka ny #operacionbikini miaraka amin'i Enerzona
Manakaiky ny fahatongavan'ny Lohataona dia efa maro amintsika no mitafy ...
Ny faran'izay tsara antibiotika par: tongolo lay
Ny fananana tongolo gasy lehibe dia fantatra eran'izao tontolo izao, ny fihinanana azy isan'andro dia manampy amin'ny fitazonana bakteria sy hanakana antsika tsy hahazo aretina isan-karazany
Ny aretina tsy fahita firy dia tsy tokony hodian-tsy hita
Amin'ny 28 Febroary, toy ny isan-taona, ankalazaina ny andro aretina tsy fahita firy. Amin'ity taona ity dia hiatrehana lalindalina ny olana momba ny kalitaon'ny fiainana.
Aretina vokatry ny proteinina diso misorona.
Saika ny asa lehibe rehetra amin'ny vatantsika dia misy ifandraisany amin'ny karazana proteinina
Hypothyroidism: soritr'aretina, antony ary fitsaboana
Fantaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny hypothyroidism ary mianatra miatrika an'io aretina io. Aza avela hisy fiantraikany eo aminao isan'andro izany
Hyperthyroidism: ady maharitra
Mianara miatrika hyperthyroidism ary mampihena ny soritr'aretiny. Izahay dia manome anao ny fanalahidy tonga lafatra hahatsapa ho tsara kokoa.
Pierre Dukan, voaroaka tao amin'ny College of Physicians
Ny Pierre Dukan malaza dia noroahina maharitra tao amin'ny College College of Physicians. Nanana antony ampy handroahana azy ny fikambanana.
Ny tetika tsara indrindra handoroana kaloria tsy misy ezaka (II)
Ianaro ny tetika sy torohevitra rehetra handoroana kaloria nefa tsy tsapanao izany, ovao ny fanaonao isan'andro dia ho hitanao ny fahafantaran'ny mizana anao
Borosy borosy nify biolojika
Ny loko sy ny endriny amin'ny fahadiovantsika am-bava isan'andro dia noho ireo borosy nify vita amin'ny volon'osy voajanahary ary azo ovaina koa.
Fanatanjahan-tena ara-batana tsotra sy mahasoa: Mandeha an-tongotra
Manontany tena izahay hoe inona no tsara kokoa raha mihazakazaka na mandeha amin'ny fahasalamantsika ary mandoro tavy
Sigara elektronika: loza mety hitranga amin'ny fahasalamantsika?
Nanjary lamaody ny sigara elektronika tato anatin'ny taona vitsivitsy, fantatsika hoe inona izany ary inona ny loza ateraky ny fahasalamantsika
Fanatanjahan-tena hampiasanao ny sandrinao
Ilaina amin'ny fampiasan-tena ny fampiasana ny sandrinao. Lazainay aminao hoe iza no fanatanjahan-tena tsara indrindra.
Ny maha-zava-dehibe ny fihomehezana
Ny hetsika fihomehezana dia miaraka amintsika isan'andro, mahafantatra ny tombony azony ary mahazo tsiky hafa amin'ny fiainana
Ny mycosis fivaviana na ny candidiasis, dia mahazatra ary mitranga izany noho ny antony maro samihafa izay afaka manova ny PH ny fivaviana, manohana ny fitomboan'ny holatra Candida Albicans.
Fonosana tantely momba ny tantely
Aingam-panahy avy amin'ny sela ny takelaka ny tantely dia foto-kevitra tsotra ahitana ny tantely tantely noforonin'ny Marksim Arbuzov mpamorona.
Ny tsara indrindra ho an'ny fisorohana mangatsiaka: toro-hevitra sy tetika
Ny toro-hevitra rehetra ilainao hialana amin'ny hatsiaka mahazatra amin'ny volana mangatsiaka
Fomba fanadiovana ny vatana amin'ny fomba tsotra sy mahasalama
Mora ny manala ny vatana amin'ireo dingana tsotra ireo, afaka andro vitsivitsy dia hahatsapa ho salama sy matanjaka ary faly ianao rehefa mahatsikaritra ny fiovana